Fanafihana ny tranonkalan’ny Vaomieran’ny fifidianana tao Pakistana · Global Voices teny Malagasy
Fanafihana ny tranonkalan'ny Vaomieran'ny fifidianana tao Pakistana
Voadika ny 04 Avrily 2019 4:46 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Aprily 2013 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Voalaza fa nisy nipiraty ny Zoma 29 Martsa 2013 ny tranonkalan'ny Vaomieran'ny fifidianana ao Pakistana. Araka ny tranokalam-baovao tao an-toerana The Express Tribune, ” nipiraty ny pejy fandraisana [ny mpijirika Indiana iray] ary inoana fa nanimba ny fisiany ho an'ny mpitsidika.” Tsy mazava ny antony nitarika ity vohikala ity hamantatra ny zom-pirenan'ilay mpanafika.
Sampana mahaleotena misahana ny fanaraha-maso ny fifidianana ankapobeny izay natao ny 11 May 2013 ny Vaomiera misahana ny fifidianana ao Pakistana (ECP).
Biraom-pifidianana ao Lahore, Pakistana, 2008. Sary: boellstiftung. (CC BY-SA 2.0)
Ny asabotsy, raha niditra ny andro faharoa ny fanafihana dia nanapan-kevitra ny Vaomiera misahana ny fifidianana fa hamindra ny tranonkalany ho any amin'ny lohamilina hafa. Nilaza tamin'ny Geo News ny loharanom-baovaon'ny ECP fa voaaro ny angondrakitra rehetra mifandraika amin'ny fifidianana na dia eo aza ny fanafihana.
Ny tolakandron'io Asabotsy 30 Martsa io, azo nidirana ny tranonkala tao Pakistana saingy mbola niadana ny fidirana taminy araka ny mpisera ao amin'ny firenena izay nifandray tamin'ny Global Voices Advocacy.
Nilaza tamin'ny The Express Tribune ny manam-pahaizana momba ny aterineto raha nanontaniana momba ny natioran'ny fanafihana ny tranonkalan'ny ECP fa mety nisy hifandraisany tamin'ny fanafihan'ny Spamhaus, ilay fanafihana DDoS (Distributed Denial of Service) lehibe indrindra izay mikendry ny fifanakalozam-baovao lehibe manerantany izany ka mampiadana ny fifamoivoizana an-tserasera any Eorôpa sy Amerika Avaratra.